Global Voices teny Malagasy » Okraina : Te-hahazo fitsaboana mahasolo tsara kokoa ireo miankindoha amin’ny zavamahadomelina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Aogositra 2018 4:10 GMT 1	 · Mpanoratra Maryna Reshetnyak Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, Naomy
Sokajy: Okraina, Fahasalamàna, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Rising Voices
(Lahatsoratra ôrizinaly nivoaka tamin'ny marsa 2009)
Tamin'ny 2 febroary ny Rising Voices  namoaka takelaka iray  niompana tamin'ny fanentanana iray tao Okraina, nokarakarain'ny fikambanana Drop-In Center . Ny fanentanana dia nifantoka tamin'ny filàn'ireo olona miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina mandray anjara amin'ny fomba fitsaboana hafa . Takian'io vondrona io ny mba ahafahan-dry zareo mahazo karazam-pitsaboana hafa amin'ireo fomba fitsaboana misy. Ny fanafody omena amin'izao fotoana tsy mampihena afa-tsy amin'ny atsasany monja ny fandraisana zava-mahadomelina ny fotoana famoahan-doto  aterany. Ny fanomezana fanafody manome fotoana lavalava kokoa amin'ny famoahan-doto no hahafahan'ny marary misitraka fotoana lavalava kokoa mialoha ny hahatsapany handray zava-mahadomelina indray.
Nandritra ny volana febroary sy marsa ny mpikambana ao amin'ny programam-pampihenana hirifiry (harm reduction) niezaka nitolona hahazoana fanafody mahomby kokoa. Namoaka antso izay nosoniavin'ny mpiara-dalana aminy tao amin'ny bilaoginy  i Pavel Kutsev, mpanentana ao amin'ny Drop-In Center. Takian'io takelaka io ny fampidirana fanafody vaovao ao amin'ny fomba fitsaboana mahasolo, satria tsy mamerina ny marary hanana fahasalamana araka ny tokony ho izy ny fanafody ampiasaina amin'izao fotoana izao.
Araka ny fitsapan-kevitra azonay, misotro toaka betsaka ny 47 isanjaton'ny marary. Amin'ny ankapobeny, ny 10-12 isanjato ihany no mahatsapa, ny 8 amin'ny 10 mampiasa fanairana fanampiny… Olona 7-8 amin'ny 96 [notsapain-kevitra] ihany no milaza fa mety amin-dry zareo ny daozy… tsy miasa mihitsy kosa ny fanafody ho an'ny ambiny. Tsy manampy an-dry zareo na dia mandra-maraina fotsiny aza, tsy handray zava-mahadomelina ilay fanafody… Tsy miaina mihitsy izahay, tsy miasa izahay, tahaka ny saribakoly ahetsiketseika izahay, afaka mandeha mankany amin'ny foibe fotsiny, manantena mba hahazo ora vitsivitsy tsy handrenesana fanaintainana.
Namoaka taratasy misokatra  hoan'ny komitim-pitantanan'ny mpanolotra fanomezana fitsaboana hafa mahasolo ao Okraina (Alliance HIV/AIDS ) ny tranonkala ofisialin'ny fikambanan'ny  tsaboina amin'ny fomba hafa. Maro ireo taratasy nosoniavin'ny marary avy amin'ny tanàna okrainiana roa lehibe indrindra. Nilaza ireo marary mandray anjara amin'ny fomba fitsaboana hafa avy ao an-tanànan'i Dnepropetrovsk fa nahazo fanafody mofototra amin'ny méthadone ry zareo ka hita ho tena tsara kokoa ny vokatr'io fomba fitsaboana iray io. Nanasongadina zavamisy tahaka izao, tao amin'ny taratasy misokatra ho an'ny komitim-pitantanana ny tao amin'ny Sociotherapia avy ao Kiev:
Araka ny lalàna okrainiana, tsy azo soratana ho fanafody omena ny marary ny fanafody avy amin'ny fomba fitsaboana hafa, tsy mety noho izany ny mihinana azy imbetsaka ao anatin'ny iray andro. Ny fangatahanay dia ny ahafahana mividy fanafody izay lavalava kokoa ny fotoana famoahany loto ary kely kokoa ny voka-dratsiny, toy ny fiankinan-doha, lasa te-hamany foana sy fanjavonan'ny fitiavan-kanao.
Manome famaranana toy izao ny taratasy:
Ho fanatrarana ny fampidirana ho ao amin'ny fiaraha-monina indray, tokony hanana fiainana ireo miankindoha amin'ny zavamahadomelina … tsy misy soritra fiankinandoha . Ilaina noho izany ny mahazo fanafody miasa 24 ora farafahakeliny ary tsy misy fiantraikany ratsy….Fa raha tsy izany dia hihena ho ora vitsivitsy monja ny tsy fahenoana hirifiry ka tsy hisy ny fanantenana ho an'ny marary hanana fiainana mavitrika sy araka ny tokony ho izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/06/123708/
 takelaka iray: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2009/02/02/ukraine-the-best-drug-for-harm-reduction-programs/
 fomba fitsaboana hafa: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9duction_des_risques
 fotoana famoahan-doto: http://fr.wikipedia.org/wiki/Excr%C3%A9tion
 tao amin'ny bilaoginy: http://depo3p.livejournal.com/2009/02/24/
 taratasy misokatra: http://motilek.com.ua//index.php?option=com_content&task=view&id=572&Itemid=78
 tranonkala ofisialin'ny fikambanan'ny: http://motilek.com.ua//index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
 tsy misy soritra fiankinandoha: http://fr.wikipedia.org/wiki/Sevrage_(toxicologie)